कला-मनोरञ्जन – ताजा समाचार
गायक दुर्गेश थापाले हालै ‘द मास्कर’ बोलको गीत युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरे लगतै बिबादित बनेको छ । यो गीत रिलिज लगत्तै गीत हेर्ने/सुन्ने नेपालीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । दुर्गेशले सोमबार सार्वजनिक गरेको गीतमा हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन् । तीमध्ये केहीले यो गीत निकै दमदार भएको लेखेका छन् । धेरैले भने गाली गरेका छन् ।‘दुर्गेश […]
काठमाडौंको पेप्सीकोलामा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका दुई जनालाई कोरोना सं’क्रमण देखिएपछि अपार्टमेन्टमा बस्ने ५१० परिवार तनावमा छ । जसमध्ये एक हुन् नायिका बेनिशा हमाल । बेनिशा सनसिटी अपार्टमेन्टको ‘ब्लक जे’ मा आफ्नो परिवारसहित बस्छिन् । अपार्टमेन्टभित्रै संक्रमण देखिएपछि त्राश उत्पन्न भएको छ । संक्रमित परिवार र बेनिशा बस्ने ब्लग फरक हो । तर, नजिकै […]
कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारमा रहेकी बागलुङकी १९ वर्षीया अंशु सापकोटाको तेस्रो परीक्षणमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। गण्डकीको प्रयोगशाला र काठमाडौंबाट पनि पोजेटिभ देखिएको हो। ‘सुरुमा हामीले पोखरामा टेष्ट गर्‍यौं। यहाँ पोजेटिभ देखियो। त्यसपछि काठमाडौं पठाएर टेष्ट गर्दा उता पनि पोजेटिभ नै देखिएको छ,’ गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले भने, ‘उहाँको लगातार तेस्रो […]
सन्नी लियाेनकाे डान्स रहेकाे ‘पासवर्ड’ युट्युबमा रिलिज (पुरा फिल्म हेर्नुहाेस )
काठमाडौं – नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’ युट्युबमा रिलिज गरिएको छ । हलमा रिलिज हुँदा दर्शकको साथ पाउन नसकेको यो फिल्म नयाँ वर्षको अवसर पारेर युट्युबमा रिलिज गरिएको हो । बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीको आइटम डान्स रहेकाले चर्चामा आएको यो फिल्ममा अनुप विक्रम शाही, विक्रम जोशी, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा लगायत कलाकारको अभिनय छ । […]
काठमाडौं । जि टिभीको शो जमाई राजा बाट चर्चित अभिनेत्री निया शर्मा आफ्नो फोटो र भिडियोका कारण अहिले चर्चित छिन्। निया शर्मालाई उनको शुरुआती क्यारियरको समयमा स्किनिंग शैलीको कारण धेरै धम्की दिइएको थियो। तर समय परिवर्तन भयो र आज निया शर्मा टिभी जगतमा चर्चित अभिनेत्री मध्ये एक हुन् जसले आफ्नो सुन्दरता र सेक्सी शैलीका कारण […]
कोरोनाभाइरसका कारण दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुर बढी मारमा छन् । भारतमा यस्ता मजदुरको सहयोगमा विभिन्न सेलिब्रिटी अघि सरेका छन् । तीमध्ये बलिउड नायक सलमान खानले त्यस्ता मजदुरहरुको विशेष ध्यान दिएका छन् । यसअघि सलमानले १६ हजार दैनिक ज्यालादारी मजुरलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए । अब उनले फिल्मी उद्योगमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि ट्रकभरीको […]
लकडाउनमा खाना पकाउन सिक्दै बलिउड सेलिब्रेटी
बलिउड सेलिब्रेटीहरु यतिवेला के गरिरहेका होलान? उनीहरु लकडाउनको समय खाना पकाउन सिक्दैछन्। कपितयले खाना पकाइरहेका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन्। बलिउड अभिनेता अर्जुन कपूरले लकडाउनको समयमा घरमा केक बनाउँदै गरेको भिडियो इन्टाग्राममा पोस्ट गरेका छन्। उनको भिडियो अपलोड गरेको केहि समयमै मलाइका अरोडाले कमेन्ट गरेकी थिइन्। View this post on Instagram I’m sure Maximus […]
‘नयाँ युग शुरु, बच्चालाई मास्क लगाउन सिकाउँदै छु !’ : सन्नी लियोनि
काठमाडौं । पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीले नयाँ युग शुरु भएको बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा बच्चालाई मास्क लगाइदिएको तस्वीर पोष्ट गर्दै लियोनीले नयाँ युग शुरु भएको बताएकी हुन् । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट बच्न एकान्तबास (होम क्वारेन्टाइन)मै परिवारका साथ बसिरहेकी लियोनीले अबको युग नयाँ भएको बताउँदै आफ्ना ३ बच्चाहरुलाई मास्क […]
मनकारी अक्षय : ४० करोड दान दिइसकेका अक्षय कुमारले फेरि गरे यति ठूलाे सहयाेग
एजेन्सी । कोरोना राहत कोषलाई ४० करोड रुपैंया दान दिएका बलिउडका मनकारी अभिनेता अक्षय कुमारले फेरि ठूलो सहयोग गरेका छन्। अभिनेता अक्षय कुमारले भारतको बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कर्पोरेशन ( बिएमसीलाई) ३ करोड भारु (झण्डै ५ करोड नेपाली रुपैंया) दान दिने घोषणा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन । अक्षय कुमारले बीएमसीलाई मास्क, (पीपीई), परिक्षण किट र […]
४६ वर्षमा लागे हास्यकलाकार केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), दिपकराजले दिए शुभकामना
काठमाडौं – चर्चित हास्यकलाकार केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढाको आज जन्मदिन परेको छ । उनी आज आफ्नो ४६ औं जन्मदिन मनाउदैछन् । २०३२ साल चैत २८ गते मकवानपुरमा जन्मेका केदार पछिल्लो समय निकै चर्चामा आउने हास्यकलाकार हुन् । २०५८ सालदेखि कलाकारिता शुरु गरेका केदारले हालसम्म हिजो आजका कुरा ,गीताञ्जली, तितो सत्य , लोकलहरी’, जिरे खुर्सानी, […]